Ihe nkuzi ndi okacha amara nke 3 kwesiri imuta site na ntaneti | Martech Zone
Satọde, Satọdee 19, 2015 Sọnde, Septemba 20, 2015 Douglas Karr
Erin Sparks na-agba Edge nke webụ redio, ndị Podcast anyị na-akwado ma sonye kwa izu. Mụ na Erin abụrụla ezigbo enyi kemgbe ọtụtụ afọ ma nwee mkparịta ụka dị ịtụnanya n’izu a. Anọ m na-atụle akwụkwọ ebook m dere maka ya Agbaze mmiri a ga-ebipụta ya n’isi nso. Na ebook ahụ, m na-abanye na nkọwa zuru oke banyere ihe ịma aka nke ịmepụta atụmatụ ahịa ọdịnaya na ịlele nsonaazụ ya.
Otu echiche nke na-ese n'elu isi m bụ n'ụzọ nkịtị na-emepe emepe nke onwu, ya na nke ọ bụla ihe dị iche iche etinyere n'otu isiokwu. Nyegharịa lụọ ma chọpụta akụkụ ị na-ede ọdịnaya ahụ… ma eleghị anya, ihe ọmụma na eziokwu, akụkọ akụkọ, na oku iji mee ihe. Ma ọ bụ pọdkastị na onye nwere mmetụta na-ekerịta ụfọdụ ọmụmụ ihe ọmụmụ pụrụ iche. Ma ọ bụ ikekwe ọ bụ ihe na-agbakọ mmekọrịta na saịtị ahụ nke na-enyere aka ịchọpụta nloghachi nke itinye ego na ya.
Mpempe akwụkwọ nke ọ bụla nwere ike ịbụ otu isiokwu, mana ị nwere ike iche etu esi - okike - mpempe ọ bụla dị iche ma wepụta ebumnuche nke otu ndị na-ege ntị. N'ezie, inye onyinye n'eziokwu abughi uzo nwere ọgụgụ isi iji buo amụma ma mepụta ọdịnaya bara uru nke na-ewepụta nsonaazụ azụmaahịa dị mkpa. Nke wetara m mkpọsa.
Nwa m nwanyị, Kait Karr, rụrụ ọrụ maka ụlọ ahịa na-eweta mma maka afọ ole na ole. Ọrụ a tọgburu ya atọgbu, ọ kụzikwaara ya ụda maka mkpọsa na otu esi atụgharị m uche na usoro afọ ojuju kemgbe ọtụtụ afọ. Dị ka onye nchịkwa nnata, nwa m nwanyị na-ahụ maka ngwaahịa niile na-abanye n'ụlọ ahịa ahụ, na-ahụ maka ngwa ahịa, na-ahụkwa maka ngosipụta ahịa n'ime ụlọ ahịa ahụ niile.
Ihe nkuzi banyere ahia ahia
Ndepụta Ngwaahịa - Dịka ndị ọbịa ụlọ ahịa na-ewe iwe mgbe ụlọ ahịa ahụ enweghị ngwaahịa ha na-achọ, ị na-efunahụ ndị ahịa n'ihi na ịnweghị ọdịnaya na saịtị gị nke atụmanya na-achọ. Anyi achoghi ile anya atumatu ahia di ka iwere ngwa ahia n’ihi na ndi ahia na - achoputa ya dika ha na aga. Gịnị kpatara nke ahụ? Kedu ihe kpatara na ndị na - ere ahịa ọdịnaya anaghị emepụta obere ọdịnaya nwere ọdịnaya? Kama ịjụ ole blọgụ ole kwa izu ụlọ ọrụ kwesịrị ibipụta, gịnị kpatara na ndị na-ere ọdịnaya anaghị ewepụta atụmanya nke nchịkọta zuru ezu nke ọdịnaya chọrọ?
Audits - Kama ịmepụta kalenda ọdịnaya nke na-atụ aro isiokwu ndị a maara nke ọma iji dee maka ọnwa na-abịa, gịnị kpatara na anyị abụghị, kama, na-eme nyocha ọdịiche dị n'etiti ngwa ahịa achọrọ na ọdịnaya edepụtarala? Nke a ga - eme ka mbiputeghari di obere ma nyere aka wepu ọdịnaya. Dị ka iwulite ụlọ, enwere ike ibu ụzọ wuo ya, emesịa ọ ga-enwe obere usoro, mechaakwa chọọ mma ya mma!
n'ọkwá - Ọ bụ ezie na ụlọ ahịa ahụ nwere ọtụtụ ngwaahịa, ụlọ ahịa ahụ na-ahọrọ ilekwasị anya na nkwalite nke nnukwu uru ma ọ bụ ngwaahịa ọhụrụ kwa ọnwa. Ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ, emepụtara mkpọsa, e mepụtara ngosipụta ngwaahịa, yana usoro ọwa niile iji kwalite ọdịnaya mepụtara iji bulie uru na nsonaazụ. Ka oge na-aga, ka ngwaahịa na onyinye na-agbanwe, ụlọ ahịa na-ezi ozi ọma na nkwalite iji nọgide na-abawanye nsonaazụ azụmahịa.
Maka nke a, anyị kwesiri ịiche ọdịiche dị n’ide ederede site n’ire ahịa ọdịnaya. Onye nwere nnomi ederede na ederede ederede apụtaghị na ha nwere nghọta dị mkpa maka ngwa ahịa, nyocha, na ịzụlite nkwalite maka azụmahịa gị. Ihe omuma ihe omuma a site na Uberflip na-ejeghari na agwa nile nke ndi ahia ahia nke oma.
Akụkụ akụkụ: Aga m edebe gi na onwu na ebook!
Tags: inyocha ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaọdịnaya ahịainfographic ahịa ahịaàgwà ahịa ahịankwalite ọdịnayawere onye ahia ahiaretailuberflip